Vakana fehin-tànana, tatoazy miorina amin'ny firavaka avaratra | Ny fanaovana tatoazy
Viking bracelet, tatoazy miorina amin'ny firavaka avaratra
Fehin-tànana Vikings mety ho aingam-panahy mety indrindra ho an'ny sanganasa manaraka izany. Mavesatra amin'ny endrika ivelany ary miaraka amin'ny motera nentim-paharazana, ny bracelet dia nampiasaina ho ody fiaro mba hiarovana ny mitondra azy amin'ny ady.
Te hanana aingam-panahy amin'ny tatoazy manaraka ve ianao? Eto isika dia hahita hevitra vitsivitsy momba ny fehin-tànana amin'ny ho avy Vikings vita amin'ny ranomainty sy hoditra!
1 Fomba nentim-paharazana
2 Amin'ny tanana na amin'ny sandry?
Ny fehin-tànana Viking dia matetika misy sisin-tany izay entanin'ny antony nentim-paharazana. na, farafaharatsiny, amin'ny singa manome azy rivotra Viking, ohatra, hoditra vita amin'ny vy, vy ...
Anisan'ireo antony nentim-paharazana, manana safidy maro ianao, tsy mahagaga amin'ny kolontsaina manankarena toy izany. Azonao atao ny manome aingam-panahy, ohatra, amin'ny goaika na amboadia raha mila endrika misy biby Viking mahazatra ianao. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny tantanana Thor na koa sambo Viking, sabatra, sabatra, na fitaovam-piadiana na zavatra mahazatra an'ireto olona ireto.
Safidy tsara hafa dia ny manararaotra ny rune hamoronana bracelet Viking anao manokana. Na amin'ny volavola tsotra toy ny hafa be pitsiny kokoa, izay ahafahan'ny rune mifandimby amin'ny bracers mainty, na koa mamorona amulet fiarovana.
Amin'ny tanana na amin'ny sandry?
Amin'ny ankapobeny, ireo karazana tatoazy ireo dia afaka mandeha amin'ny sandry. Ireo endrika etsy ambany, eo anelanelan'ny kiho sy ny tanana, matetika dia kely kokoa, na dia mety ho matevina araka ny itiavanao azy aza izy ireo. Etsy ankilany, ny endriny mandeha eo an-tampony, eo anelanelan'ny kiho sy ny soroka, dia toa lehibe kokoa.
Mahaliana ihany koa ny manamarika izany ny bracelet viking dia mety ho boribory mihidy (izay ilana ny fahaiza-mandanjalanja) na misokatra. Amin'ny tranga farany, dia ny ampahany amin'ny sandry ihany no hosaronany, izay afaka manome ny volavolanao hikasika tena mangatsiaka sy hafa.
Ny bracelet Viking dia mety indrindra amin'ireo mpankafy an'ity kolotsaina ity. Lazao aminay, manana fitoviana ve ianao? Nahazo aingam-panahy ianao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny sandry » Viking bracelet, tatoazy miorina amin'ny firavaka avaratra
Tatoazy mpampakatra, hevitra raha hanambady ianao
Hevitra tatoazy ho an'ny lehilahy